Fahad Yasiin oo ku sii jeedo si u soo dhaweeyo Wasiirkii Hore ee Amniga Cabdirashiid Janan | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Fahad Yasiin oo ku sii jeedo si u soo dhaweeyo Wasiirkii Hore...
Fahad Yasiin oo ku sii jeedo si u soo dhaweeyo Wasiirkii Hore ee Amniga Cabdirashiid Janan
Warar lagu kalsoonaan karo oon helnay ayaa sheegaya in taliyaha Hay’adda nabad sugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Fahad Yaasiin maanta kusii jeedo degmada Doolow ee gobolka Gedo .
Fahad Yaasiin ayaa la filayaa in Doolow uga sii gudbo degmada Baled Xaawo ee gobolka Gedo halkaas oo isna la filayo in maanta soo gaaro Wasiirkii hore ee amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Janan.
Sida aan wararka ku helnay Fahad Yaasiin iyo masuuliyiin kale oo katirsan dowlada Soomaaliya ayaa u tagaya Degmada Baled Xaawo dhameestirka heshiis hoose ay wada galeen Cabdirashiid Janan iyo dowlada federaalka.
Cabdirashiid Janan ayaa maanta la filayaa in isaga iyo ciidamada ka amar qaata soo gaaraan degmada Baled Xaawo halkaas ay ka socoto qaban qaabada soo dhaweyntiisa si uu heshiis rasmi ah ula gaaro dowlada federaalka.
Warar hoose aan helnay ayaa sheegaya in Cabdirashiid Janan laga yaabo in loo soo qaado magaalada Muqdisho ugana sii gudbo dalka Turkiga halkaas oo la sheegay in uu deegaansanayo ayna qeyb ka aheyd heshiiska uu la galay dowlada.
Fahad Yaasiin oo ah furaha dowlada iyo maskaxdii ka dambeesay in ciidamada dowlada la wareegaan gobolka Gedo ayaa ka shaqeeyay in Cabdirashiid Janan kasoo goosto Axmed Madoobe lana heshiiyo dowlada federaalka.
Dowlada uu hogaamiyo Farmaajo ayaa horey dambiile ugu tilmaantay Wasiir Janan oo horey uga baxsaday xabsi uu Muqdisho uga xirnaa, waxaana dowlada heshiiska kadib la filayaa in ay cafiso kana saarto liiska dambiilayaasha.
Previous articleKooxa ku Hubeysan Bistoolada oo 3 Askari ku qaarajiyey magaalada muqdisho
Next articleGeerida mid kamid ah Amiirrada ugu Saameynta Badnaa Imaaraadka Carabta
Dowladaha Masar iyo Sudan ayaa markale digniin adag u diray Ethiopia oo ay kala dhaxeyso xiisada webiga Nile-ka oo ay xukuumadda Abiy Ahmed ka...
Dalal dhowr ah oo ka tirsan Qaaradda Yurub oo billaabay inay...